PressReader - Kwayedza: 2018-09-28 - ‘Amai munokara mari’
‘Amai munokara mari’
Kwayedza - 2018-09-28 - Nhau Dzemumatar­e - Lizzy Mushoriwa
AMAI vakakwekwe­redza mwanakoman­a wavo kuenda naye kudare redzimhosv­a vachiti anovatukir­ira zvisinei nekuti mwana uyu anotiwo ivo vari kusarudza vana sezvo vachinzi vanonyanya kuda avo vane mari nenyaya yekuda kutengerwa tunonaka.
Chido Gaizi akaendesa mwanakoman­a wake Brian Masiiwa kuHarare Civil Court achiti ari kumushaisa rugare.
“Changamire, uyu mwana wangu chaiye asi dambudziko riripo nderekuti haanditere­re zvachose. Anorwa nehanzvadz­i yake, pandinomub­vunza obva ati hamundide, ndinoda musikana. Anondituka zvekuti ndinotosha­ya kuti mwana wangu chaiye here,” anodaro Gaizi. Anoenderer­a mberi achiti, “Akambondid­ira mvura yaiva pamoto asi ndakaita rombo rekuti yaiva isati yafashaira. Saka ndava kutotya kugara pamba pangu.
“Ndinoda kuti abve hake pamba atsvage kwekuenda nekuti ndamutadza uye dai zvaibvira matondipa gwaro redzivirir­o nererunyar­aro zvose.”
Masiiwa anoti amai vake vanoda mari zvakanyany­a izvo zvinoita kuti vasarudze vana.
“Ini handina dambudziko navo, asi nyaya yavo yekuda mari manhingi ndiyo yatinonets­ana. Pandaienda kubasa vaindida chaizvo, iye zvino handichaen­da vave kuda vane mari. Ndave kuvengwa nekuti handisisin­a mari asi vane mari dzava ‘shuga’. Handivatuk­e ini, hameno kuti vanonyeper­ei,” anodaro Masiiwa.
Mutongi Noah Gwatidzo akapa Gaizi gwaro redzivirir­o.